DEG-DEG: Kooxaha Premier League Oo Iska Diiday Qorshihii FA-ga Ee Tirada Ciyaartoyda Ajaanibta Ah Lagu Yaraynayay Ee Kadib Ka Bixtaanka UK Ee Midowga Yurub. - Gool24.Net
Kooxaha horyaalka Premier league ayaa ka hor yimid qorshihii xidhiidhka kubbada cagta England ee FA-gu ku doonayay in si wayn hoos loogu dhigo tirada ciyaartoyda aan UK u dhalan ee ajaanibta ah taas oo dhaqan gali lahayd marka la dhamaystiro ka bixitaanka UK ee midawga Yurub.
Waxaa mudooyinkii ugu danbeeyay socday warar badan oo soo baxay oo sheegayay in FA-gu doonayo in kala badh liiska ciyaartoyda kooxaha kowaad ee Premier league laga dhigo ciyaartoy dhalad ah iyada oo waliba la sheegay in 12 ciyaartoy oo kaliya oo ajaanib ah loo ogolaan doono kooxaha Premier league.
Laakiin hadda waxaa soo baxay go’aan ay kooxaha Premier league ku gaadheen in ay si cad uga horyimaadaan qorshaah FA-ga ee lagu xadidayo ciyaartoyda ajaanibta ah ee haddaba Premier league tirada ugu badan ah.
Saraakiisha xidhiidhka kubbada cagta Ingiriiska ee FA-ga ayaa soo diyaariyay qorshe sare loogu qaadayo liiska ciyaartoyda dhaladka ah ee qaybta ka ah 25ka ciyaartoy ee ay koox kastaaba ka diwaan gashato Premier league iyo tartamada kale ee kooxaha kowaad.
Waxaana qorshahan ka mid ah in liiskii qoondada ee ciyaartoyda dhaladka ah laga soo qaado 8 ciyaartoy oo ay hadda waajib tahay in ay koox kastaaba liiskeeda ku soo darto waxaana la doonayaa in laga dhigo 12 ciyaartoy oo dhalad ah oo qayb ka ah liiska koox kasta oo kowaad ee Premier league halka ciyaartoyda ajaanibta ah laga soo yaraynayo 17 ay hadda yihiin iyada oo lagu soo koobayo 13 ciyaartoy oo kaliya.
Laakiin kooxaha Premier league oo maanka ku haya in xataa kooxaha heerka hoose ee England ayna qorshahan ogayn ayaa cod diidmo ah kala hortagay FA-ga waxayna usheegeen in ayna aqbalayn qorshan cusub ee lagu wiiqayo awooda kooxahooda.
Marka la dhamaystiro ka bixitaanka UK ee midwaga Yurub waxaa adkaan doona waraaqaha shaqo ee ciyaartoyda ajaanibta ah iyada oo sharcigan cusub la doonayo in uu dhaqan galo balse kooxaha Premier league ayaa si buuxda u diiday in sharcigan lagu fuliyo.
Afhayeen u hadlay kooxaha heerka kowaad ee kubbada cagta England isla markaana cadeeyay in xataa kooxhaa reer Scotland ay la socdaan ayaa sheegay in qorshaha sare loogu qaadayo tirada ciyaartoyda dhaladka ah isla markaana lagu yaraynayo ciyaartoyda ajaaninta ahi in ay hoos u dhigayso heerkii kubbada cagta Britain.
Kooxaha Premier league ayaa si buuxda uga soo horjeedsaday in liiska ciyaartoyda British-ka ah laga badiyo inta ay hadda qoondadoodu tahay oo 8 ciyaartoy ah halka koox kastaaba ay haysato hadda tiro 17 ciyaartoy oo ajaanib ah waana ciyaartoyda ay koox kastaaba sida buuxda ugu tiirsan tahay.
Si kastaba ha ahaatee, waqtiyada soo socda ayaa la ogaan doonaa talaabada xigta ee uu FA-gu qaadi doono maadaama oo haddaba ay arkayaan kooxihii Premier league iyo guud ahaan kooxaha Britain oo ka soo horjeeda in sharciga ka bixitaanka UK ee midawga Yurub uu dhibaato ku noqdo kubbada cagtooda.